Endrika ivelany fotsiny ! | NewsMada
Endrika ivelany fotsiny !
Andro iraisam-pirenena ho an’ny…. Andro eran-tany hiadiana amin’ny… Andro maneran-tany ho an’ny… Voatanisa eo avokoa rehefa tokony hankalazaina na homarihina araka ny hetahetan’ireo firenena lehibe. Manara-poana, izay no anjaran’ny tany « madinika ». Kanefa, saika ny fahitana ny tranga misy any amin’ireny firenena osa ireny no niteraka ny ankamaroan’ny « Andro iraisam-pirenena… » na « Andro eran-tany… ».
Tsy antenaina hitondra fiovana eo amin’ny firenena marefo tahaka an’i Madagasikara ny fankalazana andro iraisam-pirenena. Hatramin’izao, zara raha tazana (mba tsy hitenenana hoe tsy hita) any anaty fiarahamonina ny vokatry ny fankalazana. Tsy mipaka any amin’ny mponin’ny firenena mahantra velively ny fankalazan’izy ireo ny « Andro iraisam-pirenena ho an’ny rano », « Andro iraisam-pirenena ho an’ny ala », sns. Endrika ivelany hoentin’ny manam-pahefana sy ny tompon’andraikitra isan’ambaratonga isehoana fotsiny ny fanamarihana iraisam-pirenena an’izatsy na izaroa raha ho an’ny firenena « madinika ». Ho an’ny firenena lehibe kosa, fanamafisan’orina ny fanjanahana an-kolaka ataony no anisan’ny antony namoronany ireny andro iraisam-pirenena ireny. Vanim-potoana anisan’ny hanehoany eo imason’ny firenena « madinika » fa tsara fanahy izy ireo satria manampy amin’ny vola, fitaovana, teknisianina, sns. Mandritra ny fotoana hanamarihana ny andro eran-tany iray no abobobobon’izy ireo ny tarehimarika samihafa ahafahana milaza fa mahantra sy osa ny firenena iray ka mila fanampiana… Toa midika fa « aleo izahay hipetraka eto fa raha tsy eto izahay, mahantra foana ianareo ».
… Mitohy ny fitsetsefana samihafa ka na tany manan-karembe toa an’i Madagasikara aza, lazaina fa mahantra. Zava-tsy mitombona mihitsy, saingy ekena satria izay no nolazain’ny tarehimarika nandritra ny fankalazana ny « Andro iraisam-pirenena ho an’ny…. » !